Firefox Lockwise dia mpitantana teny miafina lehibe sy azo antoka | Androidsis
Amin'ny Internet, ny teny miafina generika dia ampiasaina foana ary mora tadidy, fa tsy tsara foana ny mampiasa iray amin'ny zavatra rehetra. Mora ny manana tenimiafina matanjaka hiarovana anao amin'ny fanandramana fidirana ataon'ny olon-kafa amin'ny fikasana hangalatra ny kaontinao.
Betsaka ny rindranasa izay mampiasa ny manager tenimiafin'izy ireo manokana, Google ao amin'ny Chrome dia mampiasa LastPass, fa misy safidy tsara toa an'i Firefox Lockwise, fantatra amin'ny anarana hoe Firefox Lockbox. Ilay rindranasa dia mampiseho interface hafa ankehitriny ary manolotra fiasa fanampiny fanampiny noho ilay teo aloha.
1 Fampidirina miaraka amin'ny Firefox desktop sy ny maro hafa
Fampidirina miaraka amin'ny Firefox desktop sy ny maro hafa
Ny zavatra tsara momba ny Firefox Lockwise dia ny fitantanana tenimiafina izay hameno ny fampahalalana ho anao, noho izany dia tokony hanome alalana azy ho ao amin'ny serivisy famenoana autocomplete ianao. Ny teny miafina dia voahidy amin'ny bokotra 256-bit, manakana ny olona tsy hamaritra ny iray amin'izy ireo.
Ny Firefox Lockwise, ankoatr'izay dia mamela anao hiaro ny rindranasa amin'ny dian-tànanao amin'ny telefaona finday Android anao dia manome safidy antsika ho an'ny pin azo ekena na default. Mozilla dia miasa amin'ny fanatsarana ny Firefox Lockwise ary izany dia hahatonga fitaovana iray izay ao anatin'ny dingana manan-danja amin'ny fampandrosoana tsy azo ovaina.
Ny Firefox Lockwise dia hanampy antsika hitantana ny teny miafina amin'ny pejy rehetra, ary misy koa fampidirana tena tsara amin'ny mpitety biraonao Firefox. Ny fampahalalana dia azo ampitaina amin'ny telefaona mankany amin'ny solosaina mampiasa an'ity manager ity izay mijoro hijoro amin'ny Google LastPass tafiditra ao anaty tranokala Google Chrome.
Firefox Lockwise dia rindranasa maimaimpoana, hampiditra azy tsara amin'ny mpizaha-tany azonao ampiasaina ary hahafahantsika miditra amin'ny rindranasa amin'ny fotoana rehetra hahitana ny mombamomba ny fampiasana rehetra. Nihatsara tanteraka i Lockwise taorian'ny naha-teo ambanin'ny beta azy tamin'ny anarana hoe Firefox Lockbox.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Firefox Lockwise dia mpitantana teny miafina lehibe sy azo antoka